Iwo Akanyanya Kukurudzira Mavhidhiyo Ako Kwauri - Kuzvibatsira Rubatsiro | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Mavhidhiyo ekukurudzira ave chishandiso chine simba icho yakashandiswa kugadzirisa mashandiro evanhu munzira dzakasiyana siyana yehupenyu, munzira dzese. Mumitambo, varairidzi vanoshandisa izvi mhando yezvinhu, kunyanya pamberi pemakwikwi makuru. Nekuti iwo mameseji anotsanangurwa mumavhidhiyo ekurudziro anofungidzirwa uye akagadzirirwa kumutsa anodiwa mafambiro maitiro anotitungamira kufunga kuti isu tinokwanisa kuita chero chinhu.
Kubudikidza nemeseji inokurudzira, mazwi akazara netariro uye kuburikidza kushandiswa kwerondedzero izere nemafungiro anokurudzira. Aya mavhidhiyo azere nekudzidza, anogona kuve nenyaya chaidzo dzekuzvigadziridza dzinorarama nevanhu chaivo. Mune zvimwe zviitiko, mienzaniso kubva kune zvakasikwa inoshandiswa, yekuti zvimwe zvipenyu zvinokwanisa sei kurwa uye kuzvimisikidza pachavo kuti vagare pasi pano, nekuti kuchinjika ndiyo kiyi yekurarama.
Mune chero basa zvinokwanisika kusvika kunetseka, nekuti chiitiko chinoguma chadzikisira kunyepedzera uye chishuwo chekutarisana zuva rega rega neyakaenzana. Pasinei nebasa rekushandira kana kuti kwete, kuita chiitiko chimwe chete mazuva ese kunogona kukonzera izvo zvinozivikanwa sekutsvaira chirwere, kana chii chakafanana, kuneta chirwere kana kuneta kwebasa.
Kukurudzira kwakakosha kuitira kuti izvi zvisaitike, nekuti haisi nyaya yekuedza kana chishuwo, asi chekuchengetedza kunyepa nekuzvipira kwechimwe chinhu chinoita kuti unzwe uchikurudzirwa. Motivational mavhidhiyo akakwana kune ese aya mamiriro, nekuti mavari, zvinokwanisika kuwana izvo nyaya, zvakaitika uye mazwis kuti dzimwe nguva iwe unofanirwa kuzviyeuchidza iwe kuti unokwanisa chero chinhu.
Muchikamu chino chakanzi "Motivational Vhidhiyo" unogona kuwana zvinyorwa zvemarudzi ese, nekuti basa rebasa haridiwe nguva dzose. Vanhu vazhinji vanoda kusundirwa kubata zvimwe zvehupenyu hwezuva nezuva. Mavhidhiyo ekukurudzira ndeemunhu wese, kutsvaga zano rinoshanda iro rinokubatsira iwe zuva nezuva, kukurudzira timu yako uye kuwana mhedzisiro iri nani pabasa uye kunyange kugadzirisa hukama hwehukama mumba.
Kufunga nezve icho chikumbiro chakakura kwazvo, chakanyatso nyatso, zvingangoita izvo chero munhu anogona kurega pfungwa yekutsvaga chinhu izvo zvinobatsira chaizvo uye zvinokukurudzira iwe. Nekuti mune akawanda mamiriro ezvinhu chinodiwa ndechimwe chinhu chiriporipocho, shanduko yemafungiro, kubata kwekukurumidza kubatsira iwe kutarisana neshanduko inogara mauri.
Naizvozvo, kufambisa iyi kutsvaga, isu tinoita sarudzo yemavhidhiyo ekurudziro akarongeka yemisoro yakasiyana. Zvekuti chero nguva paunenge uchizvida, unogona kushandisa izvi zvinyorwa nenzira yakapfava uye inokurumidza. Zvakare nechero ipi yeimwe yekuzvibatsira-wega zviwanikwa iwe yaunogona kuwana pane aya mapeji. Nekuti isu tinoziva kuti hupenyu inzira yakakodzera kurarama, kunyangwe kana padzimwe nguva ma curve ari akapinza zvekuti anogona kuita kuti kuoneka kuome munguva refu.
Mumavhidhiyo anokurudzira unogona kuwana nyaya dzekukunda, kukurudzira uye kwakakodzera kuona kuti vamwe vanhu vabuda mumamiriro ezvinhu kune vamwe angave anotyisa chose. Vanhu vakakwanisa kuvandudza hupenyu hwavo, kuburikidza nezviitiko zvakasiyana, dzimwe nguva vachifumisa uye dzimwe nguva vachingodzidza. Nekuti ndizvo zvinoita hupenyu, kudzidza, kuita zvikanganiso, kutora njodzi uye kuziva kusimuka kuti uchinje nzira kana zvinhu zvashanduka.
Kugona kunzwa mazwi iwayo evanhu vanotaura nezvezviitiko zvavo, nezvekuti vangashandure sei maitiro, kana kungova chidzidzo pakukunda, zvisinei nekuti zvingaite sezvisingakoshi. Kune vamwe, izvo zviitiko uye iwo mazwi anogona kudaro iyo spark yavanoda kutanga muchina, kutsvaga nzira yekubudirira.
Vana havazi iro dambudziko, ndiyo mhinduro
Zvakanaka, vhidhiyo yandichaisa kwauri ine chinangwa chekutengesa, hongu ... asi ini ndakangochida: Kuberekwa ...
Tsamba yaFred yemanzwiro kumukadzi wake achangofa
Pazera ramakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, Fred haana kufunga kuti tsamba yake yaizogoveranwa nemunhu wese. Fred ...
Iker Jiménez nevhidhiyo yake inokurudzira pa «Kufarira»
Nguva pfupi yadarika ndakawana vhidhiyo yemunhu anga ari kuwanikwa chaiko kwenzira yake ...
Izvi zvakatsaurirwa kune vese avo chaivo vabereki
Kune baba vamwe chete, asi hunhu hwakapihwa, mutoro, werudo rusina mugumo kuvana runoreva kupira ...
Murimi anova sei mutungamiri wenyika? Mushure mekuteerera José Mujica iwe unonzwisisa
Mutungamiri José Mujica weUruguay, ane makore 78 okuberekwa aimbova mugandanga weMarxist uyo akapedza makore gumi nemana ari mutirongo, ...
Musikana ane kushushikana uye kusagadzikana kusagadzikana anosarudza kuenda ku "America's Got Talent"
Izvo zvauri kuda kuona chiito chinotyisa chekushinga. Ino nyeredzi musikana uyo kusvika munguva pfupi yapfuura ...
"Mumapepa" kana kuti kukuvadza kwevanhu kunogona kukuvadza sei
«MuDhivhuru» ipfupi yehupenyu hwakagadzirwa muna 2005 naAntonio Poi. Zvinotiratidza hunhu hunoparadza ...
Ex-ET: nyaya inotibatsira kunzwisisa nei tisina kukwana
Ipfupi iyo yandiri kukupa nhasi inonzi Ex-Et, iyo 3D animation inoitwa nevadzidzi vana vanobva kuchikoro cheESMA ...
Muridzi weMwedzi: nyaya inotiratidza kuti hapana zano risingakwanisike kuziva
Vhidhiyo yauri kuenda kunoona inotanga nemutsara unokurudzira: «Hapana zano risingagone kuitiswa, zvisinei nekuti ...
Mifananidzo yakanaka inotipa chidzidzo chehupenyu chaihwo
Jaya rinofamba rakasuruvara uye rakasuwa mumigwagwa ine rima yeguta kana kamwe kamwe rikaona chimwe chinhu mu ...
Iyo nyaya inotitaurira nezve kukura kwehukama nevamwe
Musoro weiyi inoshushikana yakapfupika ndeye 'Kuchinja Mabhatiri'. Icho chigadzirwa chakagadzirwa muMultimedia ...